Al-Shabaab oo go’doon gelisay degmada Luuq iyo Xiisad ka taagan deegaanka Ceelcadde ee Gobolka Gedo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo go’doon gelisay degmada Luuq iyo Xiisad ka taagan deegaanka Ceelcadde...
Al-Shabaab oo go’doon gelisay degmada Luuq iyo Xiisad ka taagan deegaanka Ceelcadde ee Gobolka Gedo
Luuq (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Luuq ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Ururka Al Shabaab ay bilaabeen inay xaalad go’doomin ah geliyan degmadaasi.
Ururka Al Shabaab ayaa Jimcihii maanta lagu arkay waddooyinka qaar ee soo gala Degmada Luuq, iyagoona dib uga celiyay gaadiid ganacsi u waday degmadaasi, sidoo kalena waxay dib u celiyeen gaadiidkii qaar ee caanaha keeni jiray degmadaasi.
Tani ayaa waxaa la sheegay in ay ka dambeysay markii Maamulka Degmada Luuq uu ka horyimid in Odayaal Dhaqameed ay u yeereen Ururka Al Shabaab inay ka jawaabaan amarkooda.
Al-Shabaab ayaa waxay Odayaasha Dhaqanka ugu yeereen in ay yimaadeen deegaan ay iyagu ka arrimiyan, balse lama shaacin waxa ay doonayeen inay odayaasha kala hadlayaan.
Odayaasha Dhaqanka oo damacsanaa in ay ka jawaabaan amarka Al-Shabaab ayaa waxaa is hortaag ku sameeyay Maamulka Degmada, oo u sheegay inaanay ka bixi karin degmadaasi, ciddii ka baxdaana aanay ku soo laaban doonin.
Dhanka kale, warar ka imaanaya Deegaanka Ceelcadde oo 60km u jira Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa sheegaya in ay ka taagan tahay xiisad u dhaxeysa Al Shabaab iyo shacabka deegaanka.
Xiisadda ayaa waxay timid, ka dib markii ay dadka deegaanka ka horyimaadeen xoolo Zakaawaat ahaa, oo ay ka dalbatay Al-Shabaab.
Ugu dambeyn, wararka aynu ka helayno Deegaanka Ceelcadde ayaa sheegaya in Ururka Al-Shabaab ay bilaabeen in ay xir xiraan dadka deegaanka qaarkood, kuwaa oo ay ku xirayan xabsiyada ay maamulaan.
Al Shabaab oo go'doon gelisay degmada Luuq